श्रीमान-श्रीमती वा प्रेमि-प्रेमिकाको उमेरको अन्तर कती हुनुपर्दछ ? सबैले जान्नै पर्ने – | सुदुरपश्चिम खबर
श्रीमान-श्रीमती वा प्रेमि-प्रेमिकाको उमेरको अन्तर कती हुनुपर्दछ ? सबैले जान्नै पर्ने –
काठमाडौं | नेपाली समाजमा श्रीमान् भन्दा श्रीमतीको उमेर कम हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । सायद पि’तृसतात्मक सोंच-चि’न्तनले पनि यसमा काम गरेको हुनुपर्छ । युवतीहरु पनि आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग दाम्पत्य जीवन विताउने अभिलाषा प्रकट गर्छन् । उनीहरु प्रेम गर्दा होस् वा विवाह गर्दा, आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग गर्न चाहन्छन् । गरिरहेका हुन्छन् पनि ।
किनभने अक्सर युवतीहरु पुरुषबाट सु’रक्षा खोज्छन् । उनीहरु आफ्नो जीवनसाथी आफूभन्दा परिपक्क होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरु आफुभन्दा बढी उमेरका पुरुषसँग स’म्बन्ध गाँ’स्न रुचाउँछन् । सायदै होलान्, श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर बराबर भएको । धेरैजसो श्रीमतीको भन्दा श्रीमानकै उमेर बढी हुन्छ ।
तर, कति बढी ? यसको पनि कुनै सीमा छैन । कोही श्रीमान्-श्रीमती १ बर्षका जेठो-कान्छो हुनसक्छन् । कतिमा भने १० वा ११ बर्षको उमेर अन्तर हुनेगर्छ । यस किसिमको उमेर अन्तरले दाम्पत्य सुखमा केही असर गर्छ ? किनभने विवाह एक यस्तो स’म्बन्ध हो, जसमा श्रीमान् र श्रीमतीबीच खास तालमेल हुन जरुरी छ । नभए त प्रेमले जोडिएको यो स’म्बन्धमा ख’टप’ट आउन सक्छ ।
यस किसिमको डाटाबाट अध्ययनलाई भरपर्दो बनाउनका लागि रि’लेशनसिप र प्रेमको दृष्टिबाट निष्कर्ष निकाल्न सहज भयो । यो अध्ययन केवल यही कुरा पत्ता लगाउनका लािग गरिएको थियो कि के वास्तवमा सफल र लामो सम्बन्धका लागि पार्टनरबीचको एज ग्यापले कुनै अर्थ राख्छ ?
यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर पाँच बर्षको छ, उनीहरुको ब्रे’कअप हुने संभावना १८ प्रतिशत रहन्छ । त्यसैगरी जुन दम्पतीको उमेर अन्तर १२ बर्षभन्दा बढी छ, उनीहरुको स’म्बन्ध वि’च्छेद हुने संभावना अधिक रहन्छ ।
यसको निष्कर्ष के भने, दम्पतीबीच जति धेरै उमेर अन्तर हुन्छ उत्तिनै उनीहरुको स’म्बन्धमा ख’टप’ट आउने र स’म्बन्ध वि’च्छेद हुने संभावना बढ्छ । यसर्थ दाम्पत्य सुखका लागि श्रीमान् र श्रीमतीको उमेर अन्तर पनि कम हुनुपर्छ ।
हिन्दू धर्मशास्त्रले कुनै पनि जीवको हत्या गर्नु पाप हो । मानिसले कुनै जीवको बर्बरता पुर्वक हत्या गर्छ र मार्छ भने उसले एक न एक...
– प्रचण्ड भाष्कर कलौनी तराईको हुरी जस्तै आयौ र, पहाडको खडेरी जस्तै हाहाकार मच्चाएर गयौ।।। हेरीरहे तिमीलाई आँखामा समेट्ने गरि।।। हेरीरहे तिमीलाई आँखाले समेट्ने गरि।।। तिमी बिलाएर गयौ जसरी सूर्योदयको लागि बिलाएर जान्छ चन्द्रमा हरेक बिहान।।। https://youtu.be/TZhBIOhjpjs म पर्खीरहे...
पुस्तौंदेखि चलिरहेछ अस्तित्वको एक भयानक युद्ध ! न यता न उता जस्ता नाता गोताहरू जाताततै छन् र, जिस्क्याइरहन्छन् बेला बेला । तिनीहरूलाई लाग्छ हामीसँग तिनीहरूको दम्भ भङ्ग गर्ने कुनै भेद छैन । उनी बिर्सिन्छन् हामी...
प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुला पत्र
सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्यू, संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार मुलुकलाई राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उक्त मुलुकलाई भौगोलिक सिमा र निश्चित राजनितिक व्यबस्था हुन पर्दछ ।...
प्रायः मानिसहरूलाई भुटेको मकै मन पर्छ। खाजाका रूपमा खाइने भुटेको मकैले मानव स्वास्थ्यमा विशेष फाइदा पुर्याहउने गर्छ । यसमा फाइबरको मात्रा अधिक हुन्छ। जसका...
सुदुरपश्चिम खबर तौल बढ्ने सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन प्रयोग गर्नाले मेटाबलिज्म प्रोसेसमा असर पर्छ । जसले गर्दा हाम्रो तौल बढ्छ । समस्या समाधानमा कठीन https://youtu.be/ZRAWwAucmh0 सुत्ने बेलामा मोबाईल प्रयोग...
सुदूरपश्चिम खबर - साउन १७, २०७७ 0
कोरोना माहामारीले विश्व आक्रान्त बनेको अवस्थामा हाम्रो मुलुक पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन । निजि क्षेत्रको उल्लेख्य भुमिका आवश्यक रहेको हाम्रो जस्तो विकाशसिल...
बिहे भएको पुरुषसंग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६...
हरेक महिला आफ्नो पा’र्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले युवतीहरु आफु भन्दा अलि बढी...